Chrome OS na Ndekota ya dikota Oru Windows Windows | Site na Linux
Chrome OS na Ndekota Na-adota Ngwakọta Windows Native
Sistemụ arụmọrụ Google Chrome OS ọ na-aga n'ihu na-eji nwayọ nwayọ, yana ihe ịga nke ọma metụtara ahịa nke Chromebook. Ha aghọwo otu n'ime akwụkwọ ndetu kachasị ere ahịa na Amazon, nke ahụ abụghịkwa ihe ndabara. Sistemụ arụmọrụ a dabere na kernel Linux ma nwee ike ị na-agba ngwa gam akporo bụ ezigbo nhọrọ maka ụfọdụ ụlọ ọrụ na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-achọ ihe na-arụ ọrụ, nchekwa, ma kwụsie ike.
Ugbu a, Google ewerela nso ịbịaru Chrome OS nso gaa n'ahịa azụmahịa. O meela ya n’aka na otu n’ime ndị ọrụ aka na teknụzụ, dịka Parallels. Otu ụlọ ọrụ na, ọ bụrụ na ịmaghị ya, bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu raara nye virtualization. Site na ọrụ ndị a na-ahụ maka omume ọma, ngwa ọdịnala maka Windows nwere ike ịgba ọsọ na ChromeOS.
N'ime ngwa ahụ ga-abụ ogologo oge Officelọ ọrụ Microsoft Office. Ezigbo ụlọ ọrụ ọkachamara na nke ahụ, n'agbanyeghị na enwere ọrụ dịka Google Docs, LibreOffice, wdg, eziokwu bụ na ọtụtụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ka na-adabere na ngwaahịa ụlọ ọrụ Redmond. N'ezie, ụfọdụ ndị ọrụ ahọrọla ịghara inye usoro ndị ọzọ usoro zuru oke n'ihi ụlọ ahụ ...
Ekwesịrị m ịsị, ruo ugbu a ị nwere ike iji Office n'ịntanetị, yana iji Wine, yana ịmụrụ Windows iji ngwa ndị a. I nwedịrị ike iji ngwa dị maka gam akporo na sistemụ arụmọrụ a. Ma site n'enyemaka nke Ndekota ọ ga-adị mfe karị, ọsọ ọsọ na enweghị nsogbu ọ bụla, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha bụ ụmụ afọ.
Mgbanwe a na-abata n'ụlọ ọrụ Chromebooks, nke ahụ bụ ịsị, na Chromebook Enterprise, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ n'ọdịnihu na ọ ga-emepe ụzọ maka ndị ọzọ ọrụ ChromeOS. Anyị kwesiri ịmara n'ezie otu ọ ga - esi arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ ga - abụ ihe dị na mpaghara ma ọ bụ dabere na igwe ojii dị ka ọrụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Chrome OS na Ndekota Na-adota Ngwakọta Windows Native
Versiondị ọhụrụ nke onye ahịa SSH dị mkpa bịarutere, Dropbear 2020.7
Qt 5.15 LTS, biara na nkwado afọ 3 na ozi ọma a